AbeMKMVA basongela uhulumeni - Ilanga News
Home Izindaba AbeMKMVA basongela uhulumeni
AbeMKMVA basongela uhulumeni
Bathi bafuna izindlu nemisebenzi obathembise zona
AMALUNGU oMkhonto weSizwe elele onqenqemeni lomgwaqo emuva kokukhishwa kwawo ebhilidini abehlala kulona. ISITHOMBE NGU: ZIMBILI VILAKAZI
ASONGELA uNdunankulu waKwaZulu-Natal, uMnu Sihle Zikalala, uNgqo-ngqoshe wezokuHlaliswa kwaBantu nezeMisebenzi yoMphakathi, uMnu Jomo Sibiya neMeya yeThe-ku uMnu Mxolisi Kaunda, amalu-ngu oMkhonto Wesizwe Military Veterans Association (MKMVA), aselala emgwaqweni eThekwini.
athi buzochitheka bugayiwe uma kuphela izinsuku eziwu-30 bengezi kuwona ukuyowachazela ukuthi azithola nini izindlu nemisebenzi athenjiswa yona eminyakeni edlule.
La malungu eMKMVA alingani-selwa ku-86 angena ngo’dli’ ebhilidini iPalm Beach Hotel, mhla ka-28 kuNhlaba (May) 2021 kodwa akhishwa ngamaphoyisa kaMasipala weTheku, emuva komyalelo woMnyango wezokuHlaliswa kwaBantu nezeMisebenzi yoMpha-kathi.
Umnyango wawuthole imvume eNkantolo eNkulu yaseThekwini ukukhipha la malungu kuleli bhilidi. UMnu Skhumbuzo Jili (48) oyingxenye yamalungu ale nhla-ngano asecambalala ezipontshini emgwaqweni ongakuleli bhilidi akhishwa kulona, uthe buzochitheka bugayiwe uma kuze kushaya umhla ka-23 kuNhlangulana (June) 2021 laba baholi bengezi ukuzokhuluma nabo.
Utshele ILANGA ukuthi banquma ukuzingenela kuleli bhilidi abakhishwa kulona ngoba kabanazo izindawo zokuhlala, kanti izindlu ababethenjiswe zona basazilindile nanamhlanje.
“Kayikho into esiphatha kabi njengokuthi salwela ukuthi leli lizwe lithole inkululeko kodwa uma seliyitholile, esibambisene nabo kuhulumeni okuyi-ANC, sebeyasikhohlwa.
“Ziningi kakhulu izethembiso abazenzile ngokuhlukana kwabo – kusuka kuhulumeni kazwelonke kuze kuzofika emazingeni aphansi – bethi sizobhekelelwa ngezidingo ezifana nezindlu nemisebenzi, kodwa namanje sisahleli silindile.
“Izwe lethu langena kuhulumeni wentando yeningi eminyakeni ewu-27 edlule kodwa thina akukho esinga-kukhomba sithi sibhekelelwe ngakho wuhulumeni wethu yize salwa,” kusho uMnu Jili.
Uthe bayafunga bayagomela ukuthi uma kushaya uLwesithathu bengafiki kubona laba baholi, bazobuyela kuleli bhilidi eselivalwe ngokhonkolo
emnyango maqede kwasha-yelelwa ucingo oluqinile ngaphezulu.
“Sifuna bazi ukuthi uma sesingaphakathi, ngeke kubelula ukusikhipha.
“La maphoyisa ababewathumile emasontweni amabili adlule, sawahlo-nipha ngaleso sikhathi saphuma, kodwa ngeke siwahloniphe kulokhu.
“Sikhathele ngabaholi abadlala ngathi benza izethembiso abangazifezi,” kusho uMnu Jili.
UNkk Thembisile Shezi yena uthe, okubaphatha kabi wukuthi njengoba behleli emgwaqweni nje, bapheka khona, badla khona, bageza khona, balale khona.
Uthe bapheka ngezitofu zegesi kanti amanzi okupheka, ukuphuza nokugeza bawathatha ezindlini zangasese zasolwandle olubude buduze nalapho behleli khona.
“Kunzima. Siphephethwa wumoya, sibambelana izingubo zokulala uma sigeza noma sigqoka. Sibuhlungu ngokuthi uhulumeni we-ANC usiphatha ngale ndlela osiphethe ngayo,” kusho uNkk Shezi.
UMnu Sibiya uthe uhlele ukuthi ngoLwesihlanu ahlangane no-Ngqongqoshe wezokuHlaliswa kwaBantu kuzwelonke, uNkz Lindiwe Sisulu, ukuze babhunge ukuthi umnyango uzokwenza ka-njani ukuqinisekisa ukuthi la malungu eMKMVA akhelwa izi-ndlu ngokushesha.
Uyihlabe wayihlikiza eyokuzi-ngenela ngo’dli’ emabhilidini angahlali muntu.
“Ngabe siwuhulumeni ongana-kekeli uma sizovumela amalungu omphakathi ukuba azingenele ngo’dli’ emabhilidini angaphephi-le nangakulungele ukuba kuhla-lwe kuwo, angenawo amanzi nogesi,” kusho uMnu Sibiya.
Uphethe ngelithi ihhovisi lakhe selithintene noMnu Zibuse Cele ongumdidiyeli wamasosha eMK KwaZulu-Natal, ukuzama ukuthi babe nomhlangano ozoqhamuka nezixazululo zeminyaka.
“Siyazibophezela ngokuhlangana nabo bonke abathintekayo ukuze sakhe ubudlelwano obuqinile,” kusho uMnu Sibiya.
Previous articleIyaqina eyokubuya kukaMusona kwiChiefs
Next articleKuboshwe isihlobo kwelokubulawa kwephoyisa